Ianaro ireo teknika ireo hamerenana amin'ny laoniny ny fanakao sy hanavao azy ireo | Famoronana an-tserasera
Sary avy amin'i afgomez dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Ny famerenana amin'ny laoniny ny fanaka taloha dia lamaody kokoa noho ny hatramin'izay. Ny làlana dia feno olona mitady ny latabatr'ilay renibeny taloha izay tsy misy olona maniry hanome azy fiainana sy hanavao azy io, hampifanaraka izany amin'ny fotoantsika ankehitriny. Ary ilay izy, ilay haingon-trano eklektika, ilay mampifangaro ireo singa amin'ny vanim-potoana samihafa (araka ny hitantsika tamin'ity lahatsoratra teo aloha) dia nalaza.
eto hianatra teknika samihafa amin'ny famerenana amin'ny laoniny hazo tsikelikely ianao, hanavao ireo fanaka ratsy tarehy na taloha izay tsy milaza zavatra anao intsony. Andao ho any!
1 Fampakaram-bola fanaka: famafazana sy fampiasana tady
2 Famenoana pores na banga
3 Fampiharana famehezana stain
4 Fampiharana fandokoana
5 Famaranana farany
Fampakaram-bola fanaka: famafazana sy fampiasana tady
Voalohany, tsy maintsy mitsabo ny fanaka amin'ny alàlan'ny dingana maromaro isika, avelantsika ho vonona haneho ny famoronana rehetra ao aminy.
Zava-dehibe ny fanatanterahana tsara an'io fitsaboana io, nanomboka Izy io no hiantoka antsika amin'ny famitana ny fanaka tsara indrindra.
Voalohany indrindra, tena ilaina ny mahita fa tsy manana kankana ny fanaka (Raha manana lavaka na tabataba hafahafa ao anaty ianao dia mety hanana an'ity termite ity.) Mba hamahana ny olana dia apetaho tsotra fotsiny ny vokatra fanoherana ala hazo.
Raha ny mahazatra, ireo fanaka taloha ireo dia misy loko sy verinia, singa izay tsy maintsy esorintsika mba hampiharana ny antsika. Ho an'ity dia hampiasa teknika roa izahay, ny sanding ary ny fampiasana ny stripper.
Sanding: afaka mampiasa hodi-kazo samy hafa isika hanatanterahana an'io dingana io. Raha sand-tanana isika, dia ho dingana tena lafo izany. Mba hitsitsiana fotoana sy hamelana ny fanaka tsara kokoa, dia tsara ny mampiasa disk sander. Mila mitandrina tsara ianao, satria afaka manova ny fanaka tany am-boalohany isika raha tafahoatra. Tsy maintsy mivezivezy manodidna ny varin'ny hazo koa isika, mba hahavitana tsaratsara kokoa. Azo atao izany fa ampy ity dingana ity, arakaraka ny atiny izay tsaboinay. Raha tsy ampy izany (imbetsaka dia misy tendrony sy crannies nefa tsy azo amorom-pasika) dia tsara ny mampiasa ilay fehikibo.
Fampiasana stripper: mampiasa simika (striper) izahay hanalana loko sy verinia amin'ny fanaka. Zava-dehibe ny fanaovana fonon-tànana rehefa mampiasa ireo vokatra ireo, ary koa ny miasa amin'ny toerana misy rivotra madio. Azontsika atao koa ny manampy sarontava sy solomaso miaro izay hisorohana ny fahasosorana mety hitranga. Misy karazany maro ny striper. Ny sasany esorina amin'ny rano (mitandrema, fa mety mivonto ny hazo) sy ny hafa miaraka amin'ny sanding (Matetika ny spatula no ampiasaina hanalana azy ireo). Raha vao apetraka dia zava-dehibe ny tsy hamain'izy ireo sy hanesorana azy ireo alohan'ny hitrangan'izany (ny stripper tsirairay dia hanana fotoana fiasana voatondro ao amin'ilay fitoeran-javatra). Mety mila mila fasika indray isika hanesorana ireo fako mety hitranga.
«Wood - Crafts» nataon'i Joses-MARIA MORENO GARCIA = PHOTOGRAPHER HUMANIST dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-ND 2.0
Famenoana pores na banga
dia mety ny mampiasa mpameno, hamenoana ny lavaka ao anaty ala (ilaina izany raha manana pores lehibe dia lehibe izy, izay hiankina amin'ny karazan-kazo tsaboinay). Izy io dia masom-bolo, izay hampiharinay amin'ny alàlan'ny borosy ary esory amin'ny fampiasana spatula.
Fampiharana famehezana stain
Ny fampiasana famehezana tasy dia hanaparitaka ny tasy amin'ny endriny rehetra, izay tsy misy karazana hazo maro, izay mifoka be dia be ary mijanona ho maizina be. Mety ny fasika kely aorian'ny fanamainana, ka ny hazo dia mitovy fanamiana araka izay azo atao.
Afaka mampihatra ny lokony isika izao. Misy loko ampiasaina alohan'ny mpameno, ka tsy maintsy mamaky ny torolalana isika. Ny loko mety ho ranon-javatra (arakaraka ny anaovantsika ireo sosona no hihamaizina ny famaranana) na karazana gel. Misy koa fototra menaka o rano.
«Salone-mobile-milano-2018-franco-fanaka» nataon'i Mueble de España / Fanaka avy any Espana dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Misy fomba samihafa hamitana ny fanaka:
Laca. Tokony hofafazana amin'ny fanaka izy io.
Varnish. Antsoina koa hoe polyurethane dia tsy maintsy apetaka amin'ny sosona manify amin'ny borosy.
menaka. Mety tsara ny manamboatra mora foana ny ho avy, miaraka amina fampiharana tsotra. Tsy miaro be toy ny roa hafa izy io.
Aorian'izany dia afaka mampiasa a cera, izay hanome fiarovana antsika bebe kokoa sy famaranana tsara tarehy farany.
Misy teknika samihafa azonao ampiasaina koa, ankoatry ny fandokoana na mifameno: fampiharana ny sticker, ny fampiasana ny decapé ...ny famoronana amin'ny fikarakarana sakafo dia tsy misy fetrany, inona no andrasanao manomboka?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Ianaro ireo teknika ireo hamerenana amin'ny laoniny ny fanakao sy hanavao azy io
Ny asa rehetra mety ho azonao atao amin'ny maha-mpamorona sary anao